Nofeembar, 2018 ArcGIS-ESRI, Baridda CAD / GIS
Marka aynu aragno shaqeynayaan ArcGIS Campus Smart hawlaha sida waddada safarka u dhexeeya miiska a dabaqa saddexaad ee dhismaha Adeegyada Professional iyo mid ka mid ah Auditorium Q ah, iyadoo ay sabab u ah ee labada dal gudaha iyo isdhexgalka xogta BIM, waxaan ka heli in uu yahay is dhexgalka aad ugu dhow socodka Geo-injineernimada aragti qabanaya.
Waxa nasiib-darradu na xusuusinaysaa, in gaaska iyo injineeriyadu ay sii wadi doonaan tallaabo dheeraad ah si ay u fahmaan noocyada, iyo habka barnaamijka.
Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado isbeddelka isbeddelka ka yimaada agagaarka mashaariicda culus si loo helo khariidado kumbuyuutar oo khafiif ah. Run ahaantii aqoonyahanka kombuyuutarka oo sameeyay farshaxanka GIS server, Gis Engine ama Gis walxaha ka tagay Spain markii uu arkey sida warqadu u shaqaysay koorso ah Mapping; Anigu lama yaabi lahaa haddii uu ku soo booday qabriga qabrigiisa si uu u noqdo mid ku xigeenkiisa.
bandhige lagacna aad markii hore u muuqday jillaab ku wanaagsan on topic isticmaalka 3D in codsiyada ArcGIS, iyo sida ay u muuqato in dhufto: Muuqaal Daawade, Maps Story, ama Web App dhise ku xiran tahay ujeedada daraasadda.
Waxay ahayd muhiim in fikradaha aasaasiga ah ee la xiriira mawduuca 3D lagu qeexay horraantiiba, taas oo ka sarreeysa sababtoo ah marka la eego tirooyinka, waxaan dooneynaa in aan qaabeyno hababka. Sidoo kale dhinaca in weli waa muhiim in la eego shuruudaha nidaamka aasaasiga ah ee socda geedi socodka ku xiran noocan ah ee xogta in ay yihiin gebi ahaanba ka duwan kuwii 2D, maadaama ay yihiin kaarka naqshadeynta wanaagsan, taageero OpenGL ka mid ah in browser ah w / WebGL.
Haddii kale, ha u sheegaan saaxiibada SELPER, ee kooraska ugu wanaagsan ee maareynta hantida ee farsamada GIS, kuwaas oo horey u lahaa caqabadaha ka hor intaan la helin qaybaha OpenGL ee kaararka sawirada ee Nvidia ee Jaamacadda halkaas oo la sameeyay. Kordhin ballaaran oo ay sameeyeen dibad-baxayaasha ardayda Bogotanos kuwaas oo ku adkeeyay in ay sameeyaan baaritaano ku filan maalintii hore.
Intaa waxaa dheer, waxay muujiyeen bilaabista taageerada si ay u ordo qalabka qalabka mobile sida taleefannada gacanta ama kaniiniyada.
naqshadaha waa nooca 4.xy ka kooban yahay qaybaha muuqaalka iyo widgets, iyo sidoo kale aqbalaan layers kala duwan ee macluumaadka laga helay ilo xog kala duwan. naqshadaha Tani laftu on 3.x maxaa yeelay, bandhigay 3D waxaa laga heli karaa oo keliya heerka this. qalabka Webscene iyo SceneView waxaa loo isticmaalaa 3D maamulka xogta iyo waxaa si buuxda lagu biiriyay API ah, iyo sidoo kale sida ay lagu beegi karaa xogta 3D Qaabaynta heli karaa aplicacioneos hore.
madax, taas oo u oggolaanaysa in wareegga kamarad lagu sameeyo goobta shaqada.
GoTo: waxaa loo isticmaalaa in lagu dhiso aragti sida aad rabto inaad u aragto 3D, oo aad ku dhejin kartid qalabkan, sida inaad dhigato heerarka qaarkood madaxa si aad u sameysid animation ah wareeg.
ToMap: waxay qaadataa isku-duwidda aragtida waxayna ku qoreysaa khariidada 2D
toScreen: waxay kuu ogolaaneysaa inaad muujiso dhibic khariidadda 2D kadibna dib u dhigo muuqaalka 3D
hitTest: waxaa loo isticmaalaa si loo go'aamiyo sifooyinka khuseeya barta gaarka ah ee aragtida
Waxay sidoo kale lagu qeexay in dhismaha 3D map a ayaa qalab isku mid ah si ay u abuuraan hal 2d, sida isticmaalka basemaps, layers ama layers kuwaas oo sidoo kale ay taageerayaan in 2D (WMS, fallaadhaha ama CSV).
Si kastaba ha noqotee, waa in la tixgeliyaa in lakabyada 2D aysan ku jirin macluumaadka "Z" (dhererka), taasuna waa sababta ay u samayso xogta ay lagama maarmaan u tahay in lakabyo la xidhiidha 3D ay tahay dariiqa dhibcaha, Meshlayersama sareeyaasha. API gudahood kaala tashan karaa layers 3D kuwaas oo sida quruxsan dhibcood gaar ah hortiisa gudahood, in sanamkii (1) beerta asal ahaan lagu arkay, iyo sanamkii (2) sida badala ka weydiinta ama la-talin la sameeyey.
Waxay muujiyeen tusaalayaal badan oo ku saabsan sida xogta loo metelayo, tusaale ahaan, xogta ay ku taageereyso SceneLayers (dhibcaha), iyo walxaha 3D (3D Objects).
Waayo, magaalooyinka waaweyn oo wakiil ka ah waxyaabaha 3D waa herrramienta awood leh, sida aad ka arki kartaa, ma ahan oo keliya meesha aan ollogga ah ee shayga, laakiin xiriirka mugga ay la deegaanka, sida aad ku dari kartaa carácteríisticas jaleelada mid kasta shay. Waxaa lagu muujiyay shaxanka soo socda sida ay u soo xulay dhismaha random in City New York, iyo waxaad ka arki kartaa oo dhan sifooyinka ay. Sidoo kale waxay la diyaarin yaabaa sida ay weydiimo badan dhismayaasha sida: meesha dhismayaasha qaarkood isagoo kala duwan ee height gaar ah ama qeexid ee waddooyinka aan fiicnayn ku yaalaan
Waxay taageertaa maareynta lakabyada sida IntegratedMeshLayer, taas oo ah unug macluumaad ah oo ka yimaada dareemayaasha sida drones. Ma ku jiraan macluumaadka go'doomin ee qaab kasta sida sawirka hore, laakiin waa xog aad u badan oo ku saabsan sifooyinka 3D.
Sida darajada dhibcaha, waxaad ku ciyaari kartaa baaxada dhibcooyinka si aad u hesho muuqaal wanaagsan oo xogta ah, maaddaama lakabka dhibcaha ee kasta uu yeelan karo balaayiin macluumaad ah, laakiin looma matalo shey 3D laftiisa.
Waxay tilmaameen isticmaalka calaamadaha 3D, kuwaas oo lagu soo bandhigay qaababka flat / flat, iyo calaamadaha mugga ee la xiriira sheyada abuuray 3D. Kuwani waxay raaci karaan noocyo gaar ah sida nooca walaxda. Waxay muujiyeen isticmaalka daroogada loo yaqaan "Extrudes" si ay "midabka" u sameyso qaabka ayadoo loo eegayo sifooyinka,
Noocyada bixinta la isticmaali karo ayaa lagu muujiyay: fududeeyaha, halkaasoo walxaha oo dhan ay leeyihiin hal calaamad, hal uniqueValueRenderer halkaas oo aad ku kala soocaysid sheyga, sida uu qabo sifo, iyo ClassBreakRenderer halkaasoo shay kasta oo shay kasta loo arko marka la eego fasalka: kiiskan waxay tilmaameen inta u dhaxaysa dhismaha ay qaadato si loo helo nidaamka gaadiidka dadweynaha.
Xirmooyinka 3D: oo leh bandhig banaanbax ah waxay muujiyeen farqiga u dhexeeya walxaha, labadaba horay iyo yaryarba.
Dhismaha codsiyada: laga bilaabo goobta iyo walxaha 3D.
Xaaladda Muuqaalka Sahanka: wuxuu qeexayaa nuxurka iyo qaabka muuqaalka 3D waxaana loo gudbin karaa Portal for ArcGIS.
Qiyaasaha geoodheer: ma aha oo kaliya diiradda dhismaha dusha, laakiin sidoo kale waxay u oggolaaneysaa in ay qiyaasaan masaafada caalamka.
codsiyada Building, iyo saxba 3D sida ay boos xaqiiqada soo bandhigay, xarriijimo ama goobooyin wac meesha sifooyinka qaarkood la tilmaamay, sida tags in ay yihiin ku dhufto ee sida Google Earth, haddii ay taasi ku 3D
Declutter: isticmaalo si loo daahiriyo ama sumadaha filter ama tilmaamood ee waxaa looga baahan yahay in ay arkaan on 3D map-ka, sidaas ka fogaanaya wax badan oo ka mid ah calaamadaha in hana u oggolaan in muuqaalaynta sax ah, oo waxaan ka dhigi buuq marka ay joogaan wax gaar ah.
Samee Layliga Xadka
Widget widget: taas oo u gudbin doonta macluumaadka hore loo qorsheeyey ee shayga 3D
Qaybinta xogta badan: ma ahan mid keliya oo u dhigma magaalo gaar ah, laakiin wadan ahaan (waddan).
Muuqaalka dariiqa darawalka
Qodobbada loo yaqaan 'webinar-ka' ee ku saabsan geoengingering
Gaaban, mawduucuna waa mid ansax ah; xusuusnaashada in isbedelka ku wajahan Daraasadda Digital Twins iyo Ceelasha Muuqaalku ay u baahan yihiin in ka badan oo ka fekeraan maamulka maareynta macluumaadka, kuwaas oo qaabkoodii si aad ah looga adkaaday, isdhexgalka qaabaynta hawlgalka ayaa wax laga qabanayaa. Suuqa waa mid ballaaran, rajo iyo taariikhda ay leedahay xalal badan oo ku dhow inta loo adeegsado isticmaalaha ugu dambeeya; inkastoo kuwa naga mid ah ee isticmaala tiknoolajiyada si ay u sameeyaan qalab aan qasacad lahayn, waddadu weli way adag tahay. Tani waxay ka tarjumaysaa, ka dhigaysaa isku dhafka kale dhinacyada sida waqtiga, qiimaha iyo wareegga nolosha ee hababka; ma heerka xogta iyo farsamada, sida aan ku adkeyso waa theme cad ah, laakiin la qabsashada xanuun yar in falalka user nolosha dhabta ah si ay u dhex- Silsilad macaamil ganacsi ee maraya macluumaad da'ayeen. Laga soo bilaabo dhinaca ESRI, xogta dhismaha waa yara adag tahay, maxaa yeelay, inkastoo xogta hadda dhexgalaan kartaa BIM dhisay on Revit, weli u eg laba Caalamka gaar ah oo u baahan isbadal ah oo adag. Shuqullada cusub caymiska waxaa loo isticmaali karaa on daydo BIM, laakiin waxaa jira xaddi dhaafka ah ee macluumaadka CAD si ay u fuliyaan shuruudaha gudaha la meelaha poligonizados, sarreeya iyo xataa layers ku xadgudba waa cabiran.
Si kastaba ha noqotee, haddii Esri u qalmo mudnaan, waa horumarka ay ku gaadhay xagga aragtida soojiidashada iyo fudud. Waxaan horeyba u qiyaasi karaa niyad jabkii Don Jack, isaga oo qaba hamigiisa ah "aan u fududeyno" hoggaamiyeyaasha khadadka toosan ee AutoDesk, guurkaas dambe ee guusha leh laakiin ku guuleystay "ku dhowaad codsiga ArcGIS Pro»Waa inaad ka heshaa go'yaasha maadaama ay la mid tahay dhowr qaybood oo tilmaamaya isku mid laakiin ay jiraan dhibaatooyin ah in la fududeeyo nuxurka natiijooyinka tokoorada, injineerinka Warshadaha, Injineerrada Rayidka iyo Architecture. Waana isbeddelka sahlan ee khariidadda farshaxanka ee GIS ay ku dhacday, waa in ay wali la soo kulmaan CAD-da caadiga ah, caado-darradaas darteed in la iloobo in qorshuhu yahay dariiqa kaliya, laakiin in waxa ugu muhiimsan ay tahay in dhismaha la hawl-geliyo.
dhaqanka wanaagsan GIS Tusaale, oo khafiifa, diiradda on sidaynu xaqiiqada noqon doonaa waxtar u leh hybrid CAD / BIM, taas oo in muddo ah waxay yeelan doonaan in ay ku noolaadaan, sababtoo ah ansaxinta of BIM dalal badan u dhaco muddo dheer, gaar ahaan by jidho xeerarka saraakiisha beryihii hore ee ku xayiran on labada warqado ugu horeysay ee aragtida AECO ah.
Kuwani waa koorsooyin qaarkood oo aan kugula talineyno inaan ku cusbooneysiinno, qiimo jaban.
ArcGIS Pro - Baro si fudud!Golgi Alvarez, AulaGEO AcademyArcGIS Pro waa qaybta cusub ee ArcMap€ 199.99€ 139.99 3.5 (qiimeynta 33)
Bootcamp Web Developer BootcampKoorsada kaliya ee aad u baahan tahay inaad barato horumarinta webka - HTML, CSS, JS, Node, iyo More!€ 199.99€ 139.99 4.6
Saaxiibka Angular - Hagahan oo Dhameystiran (2020 Edition)Master Angular 9 (hore loogu yiqiin "Angular 2") oo aad u dhisto barnaamijyo deg deg ah oo wax ku ool ah, firfircoon oo weheliya kan ku xiga Angular.js€ 189.99€ 132.99 4.6
Saaxiibka Baro Hacking Akhlaaqda ah laga bilaabo SawirkaNoqo mid wax jabsada anshax jabiya nidaamyada kombuyutarka sida kuwa koofiyadaha madow u shaqeeya oo u xafida sida khabiirada amniga.€ 194.99€ 135.99 4.5
Post Previous«Previous Skrill - bedelka Paypal
Post Next Doorka jototechnology ee is-beddelka caddaynta 3DNext »